layliyo 7 in laga takhaluso laalaabka ee dhabarka iyo dhinac - Maag CAAFIMAADKA PLUS - TELES Relay
ACCUEIL » QODOBO »Jimicsiyada 7 si ay uga takhalusaan laalaabkii dhabarka iyo dhinacyada - SANTE PLUS MAG
Welcome / Fayo & Caafimaad / foomka / cayaaraha / Laylisyada la bartilmaameedsanayo /
Jimicsiyada 7 si ay uga takhalusaan laalaabkii dhabarka iyo dhinacyada
Taariikhda ugu dambeysay ee taariikhda: 12 April 2019
Xitaa haddii aad gaartay culeyska culeyska, waxaa weli jira qaar ka mid ah saamaynta cuntooyinka qaarkood. Marmarka qaarkood, cufurta dhabarka iyo dhinacyada ayaa ah calaamad muujinaysa jir aan lahayn wax khafiif ah. Si loola dagaallamo maqnaanshaha maqaarka, waxba maaha sida jimicsiga la beegsanayo. Adiga oo ku shaqeynaya, waxaad heli doontaa jirka jirka, garaaca oo ka takhaluso lakabyo aan saxsaneyn.
Jirkad adag oo tayo leh ayaa ina dhigtay kalsooni. Nasiib darro, qaab nololeed oo aan caadi ahayn iyo caadooyinka cunnooyinka saboolka ah ayaa naga dhigaya inaan ka dhigno yoolkeena. Cunto caafimaad aan fiicnayn ayaa sidoo kale noo horseedi karta cuduro badan sida cayilka, xanuunka wadnaha, macaanka ama xanuunka wadnaha. Dhammaan dooddani waxay naga dhigeysaa inaan qaadno tallaabooyin wanaagsan oo ku saabsan caafimaadkaaga. Ku tababarjimicsiga si joogto ah ma aha oo kaliya waxay ka caawisaa in laga fogaado cayilka laakiin sidoo kale inuu dareemo wanaagiisa jirka. Si laguu caawiyo, halkan waxaa ku jira laylisyo fudud oo 7 ah oo guriga lagu sameeyo:
1 - Dabaasha
Aad u faa'iido leh xoojinta suunka caloosha iyo dhabarka, booska dabaasha ayaa kuu ogolaanaya inaad dhabarkaaga dib u dhigto. Taas darteed, kaliya calooshaada u jiifso. Lugaha waa in la faafiyo, bustaa wax yar ayaa kor loo qaadaa. Gacan bidix iyo lugta midigba isku mar. Kala bedeli gacantaada midig iyo lugta bidix. Waxaad ku soo celin kartaa 15 ku celcelinta layligan.
2 - Gubashada
Dhaqdhaqaaqaas waxaa lagula talinayaa inuu lahaado caarada midig. Waxa kale oo ay ka caawineysaa dhabarka dambe. Si aad u sameysid layligan, u jiifso dhinacaaga kuna nastee gacantaada. Boostada waa inay noqotaa mid toosan oo kacsan. Hadafku waa in la xajiyo booska 10 ee sanadaha 20 ka hor inta aan la sii deyn.
3 - Xumada sideeda leh xumbo
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad hubisaa in gacmahaaga si wadajir ah loola shaqeeyo lana xajiyo wareegyada 30. Layligani wuxuu u baahan yahay dhabarka iyo dhinacyada. Dhaqdhaqaaq dhamaystiran oo kuu oggolaanaya in aad ka takhalusto foolxumo fool xun.
4 - Ku-sii-dheeraynta kordhinta booska cobra
Layligani wuxuu isku daraa yoga iyo bodybuilding. Jagada cobra waa in la jiifiyo xagasha caloosha ilaa ugu badnaan. La qabsashada cumbarafka ayaa riixa gawaaridaada dib u celiya si aad u taabato dhabarkaaga bowdyahaaga. Dhaqdhaqaaqani wuxuu xoojinayaa dhabarka. Qabo muuqaalkan oo ku celi saacadaha 15.
5- Oblique oo leh kubad fayaqaale
Layligani, waxaad u baahan doontaa kubad jireed. Isku dheji markaad xiraneysid. Samee dhaqdhaqaaq isku mid ah dhinaca kale ilaa 15 ilbidhiqsi. Haddii aad rabto inaad xoojiso agagaarka, tani waa dhaqdhaqaaq habboon.
6 - Dhaqdhaqaaqa labada dhinac ee taakulaynta
Fikradda inaad ku adkaysato walaxyada iyo calooshaada, dhaqdhaqaaqan ayaa kaa caawin doona dhabarkaaga. Marka aad kubbada toosan horteeda ku hayso, dhaqdhaqaaqa dhinaca bidix ka samee dhinaca bidix ilaa midig. Ku celi saacadaha 15.
7 - dhaqdhaqaaqa isku-dhafan ee leh calaamadaha
Dhaqdhaqaaqan, waxaad weydiisan doontaa dhabarka iyo suunka caloosha. Waa sahlan tahay: calaamada gacmahaaga si toos ah u qabo oo dhabarkaaga toos u qabo, ka dibna calaamadaha dib ugu soo laabo laabtaada. Samee jimicsiga 15 layligan.